Ogaden News Agency (ONA) – Cudurka Daacuunka Oo Askar Ku Laayay Xerada Balidoogle.
Cudurka Daacuunka Oo Askar Ku Laayay Xerada Balidoogle.
Posted by Daljir	/ June 1, 2017
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo booqday Xerada Bali-doogle
Ciidamadda milateriga Soomaaliya ee fadhigoodu yahay xeradda Balidoogle ee gobolka shabeelada Hoose ayaa dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg ah, ka dib markii Labo askari oo ka tirsanaa ciidamadda ay uu geeriyoodeen cudurka daacuunka.
Ilaa 50 Askari oo kale oo uu ku dhacay cudurka daacuunka ayaa la dhigay xarumo caafimaad oo degaanka ah sida ay saraakiil milateri u sheegeen Idaacadda Dalsan ee Magaaladda muqdisho, waxayna sheegeen inay ka cabsi qabaan in xaaladu ay faraha ka baxdo.
” waxaanu u baahan nahay in si deg deg ah loo soo faragaliyo, waxaanu ka cabsi ka qabnaa in askar badan u dhintaan cudurka daacuunka haddii aan gargaar deg deg ah lala soo gaarin” sidaas waxaa yiri sarkaal magaciisa qariyay oo la hadlay idaacadda Dalsan
Waxaa la rumaysan Ilaa 500o askari oo ka tirsan ciidamadda dowladda federaalku ay degan yihiin xeradda Bali-doogle, iyadoo qaarkood dhawaan laga soo wareejiyay xeryo ku yaal magaaladda Muqdisho. Waxaana dhowaan booqday ciidamadda Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali khayr si kor u qaado niyadda ciidamadda.
Gabagabadii, ilaa 400 qof ayaa la aaminsa yahay inay u geeriyoodeen cudurka daacuunka tan iyo markii ay dhamaatay abaartii darnayd ee degaanadda Soomaalida saamaysay.